Mahefa 23 taona: “Ireny no mendrika alaina vady”
Mahasarika kokoa amiko, ny vehivavy saro-kenatra satria azo antoka fa mbola tsy nahavita fiainana be : madio e! (tsiky kely). Ankafizin’ny lehilahy mantsy izany hoe sipa mbola tsy nisy nikitika izany sady reharehany amin’ny namany koa. Sady ireny koa anie tsy dia mandany vola be loatra ny miaraka aminy (hehy).Ary ny farany dia mety ho hendry koa izy ireny no sady mendrika alaina vady mihitsy.
Niaina: 28 taona “Ireny no mora adalaina”
Araky ny resaky ny samy bandy aloha: Ny tena itiavan-dry zalahy an’ireny vehivavy sarokenatra ireny dia noho izy ireny mora adalaina kely sy mora milefitra ka afaka atoro tsara. Azo lazaina koa anefa hoe lehilahy tsy mahatoky tena loatra no tena voasarika amin’ireny.Mihevitra izy fa tsy hahazaka ireny vehivavy be resaka sy tia rendrarendra ireny dia aleony mirona kokoa amin’ireo saro-kenatra izay heveriny ho “simple” nefa azony antoka fa ho azony.
Zonirina, 32 taona: “Ireny no mety aminay saro-piaro”
Voalohany aloha dia izaho tena lehilahy saro-piaro be mihitsy. Faharoa, vehivavy tsy dia mifanerasera be amin’ny olona ny ahy no tena tiako. Ny vehivavy sarokenatra amiko no mamaly ireo fitakiako ireo. Ireny rahateo koa tsy atahorana manao an’ilay kifosafosa ataon’ny vehivavy sasany sy hitantara ny fiainanay etsy sy eroa. Sady ireny namana ireny ihany anie no manita-kevitra amin’ny fampirafesana sy ny ditra avy eo e! Rehefa izy mihitsy no hendry ka tsy mifanerasera be dia efa ok! (hehy)Rehefa mahafeno ireo fepetra ireo ny ahy ny vadiko dia hajaiko sady tiako, no ezahiko izay ahasambatra azy.
Fanamarihina: Nisafidy ny tsy aseho tarehy moa izy ireto mba hahafahana mamoaka izay tena heviny marina sy tsy hisian’ny olana amin’ny olo-tiany avy.